Afaka manolo ny MacBook vaovao ve ny iPad Pro? | Vaovao IPhone
Apple dia maniry ny iPad Pro ho tena fiandohan'ny vanim-potoana Post-PC. IPad iray misy heriny lehibe ary miaraka amin'ireo fitaovana ilaina mba hahafahan'ny takelaka Apple manakana ny maha-vokatra azy hohanina ary manomboka ho iray hamokatra. Ny efijery goavambe, ny klaviny ary ny Apple Pencil, miaraka amina processeur A9X sy RAM 4GB dia nametraka azy io tamin'ny toe-javatra mety indrindra hahafahana miatrika solosaina finday amin'izao fotoana izao, saingy ny vidiny sy ny fananana ny iOS ho toy ny rafitra miasa dia mametra izany fatratra. Mety ho iPad Pro ve no tena mahasolo ny MacBook?
2 Fandraisana andraikitra ambony sy fizakantena
3 Fitoerana voafetra
4 Fandraisana interface sy Apple Pencil
5 iOS vs OS X, amin'izao fotoana izao dia tsy misy resaka azo atao
6 Fiandohana tsara nefa amin'ny vidiny lafo
Sarotra ny mametraka fampitahana eo amin'ny fitaovana roa tsy mitovy amin'ny MacBook sy iPad Pro. Ny voalohany dia solosaina finday "mahazatra", tablette faharoa. Saingy tiako farafaharatsiny mba ho afaka taratra ireo lafin-javatra izay azo ampitahaina amin'ny fitaovana roa tena samihafa fa ny prérioriora dia miady ho an'io toerana io ihany.
Weight 0.92 kilao 0.71 kilao
fizakan Ora 9 Ora 10
fifandraisana USB-C tselatra
Storage 256GB-512GB 32GB-128GB
Eto amin'ity latabatra ity tsy hita ireo lafin-javatra toy ny RAM, fikirakirana na famahana ny efijery, saingy heveriko fa angona tsy misy ifandraisany firy amin'ny fampiharana izany, satria fitaovana manana rafitra fiasa samy hafa izy ireo ary noho izany dia ho toy ny miditra amin'ny ady mandrakizay eo anelanelan'ny RAM an'ny fitaovana Android sy iPhones.
Fandraisana andraikitra ambony sy fizakantena
Heveriko fa tsy misy isalasalana fa ny fitaovana roa dia mitovy portable, samy ho an'ny refy sy ny lanja ary ny fizakan-tena. Ny fahafahana mivoaka miaraka amin'ny solosainao findainao na ny takelakao amin'ny maraina ary manadino ny charger ao an-trano dia izay no tadiavin'ny maro, ary ireo fitaovana roa ireo dia mahafeno io fepetra io. Ho fanampin'izany, ny refy misy azy dia mitovy ka tsy ho hitanao akory ny fahasamihafana misy eo amin'ny fanaovana ny iray na ny hafa.
Ny iPad Pro dia misy amin'ny capacities roa, 32GB sy 128GB. Raha izany dia ampianay ny zava-misy fa tsy azo atao ny mampitombo io fahafaha-manao io Ny takelaka Apple dia misy fatiantoka mazava raha oharina amin'ny MacBook, izay maodely fototra indrindra dia 256GB ary misy maodely hafa misy 512GB. Marina fa ny iPad Pro dia fitaovana namboarina hitahirizana rahona, na amin'ny iCloud na amin'ny serivisy mitovy aminy, saingy mbola fetra ny fakana izany arakaraka ny zavatra ilainao.
Ny fifandraisana misy dia mampisy fahasamihafana lehibe eo amin'ny fitaovana roa. Ny MacBook dia manana ny fifandraisana USB-C tokana notsikeraina be loatra, ary ny iPad Pro dia manana ny seranana Lightning mahazatra hita amin'ny fitaovan'ny iOS. Na dia mety mieritreritra aza ny maro fa mamela azy ireo hisarika tekinika ara-teknika ity dia hafa tanteraka ny zava-misy. Efa misy adapter ho an'ny USB-C izay manome anao seranana maromaro na mifanentana amin'ireo fifandraisana USB mahazatra, zavatra tsy misy amin'ny Jiro.. Azonao atao ny mampifandray ireo fitaovana fitehirizana ivelany amin'ny MacBook, na amin'ny mpampitohy USB nentim-paharazana (amin'ny alàlan'ny adapter) na amin'ny USB-C, fenitra iray izay hanjary be dia be any amin'ireo peripheraly kahie.
Fandraisana interface sy Apple Pencil
Heveriko fa ny fahasamihafana lehibe indrindra misy amin'ireo fitaovana roa ireo ary angamba iray amin'ireo mason-tsivana lehibe indrindra rehefa manapa-kevitra amin'ny iray na amin'ny iray hafa. Ny iPad dia manana efijery mikasika be dia be miaraka amin'ny vahaolana 2732 × 2048 (264ppi) raha toa kosa ny MacBook manana efijery mitovy habe aminy, miaraka amin'ny famahana ambany kokoa (2304 × 1440 sy 226ppi) fa tsy mikasika. Fa kosa misy trackpad misy ny haitao Force Touch izay afaka manonitra ny tsy fahampiana io, saingy azo antoka fa tsy azo lazaina ho mitovy.
Izahay koa dia manana ny Apple Pencil, pensilihazo nomerika mahafinaritra Azo antoka fa hanonofinofy ireo mpamorona ny fahafaha-manolotra azy ireo eo akaikin'ilay efijery lehibe io. Raha ny momba ny MacBook dia mila manampy takelaka misy sary izahay, ankoatry ny fanehoana fiakaran'ny vidiny lehibe, dia mampihena ny fampiononana amin'ny filana sehatr'asa lehibe iray ary tsy azo ampiasaina na aiza na aiza.
iOS vs OS X, amin'izao fotoana izao dia tsy misy resaka azo atao
Aza avela hisy tsy hahatakatra ahy: ny iOS dia rafitra fiasa lehibe ary ny fanatsarana voaray tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nametraka izany tamina toe-javatra akaiky kokoa izay azon'ny rafitra "mahazatra" toa ny Windows na OS X. Izaho manokana dia mampiasa ny iPhone-ko isaky ny miasa ary izy io dia fitaovana ilaina isan'andro isan'andro amin'ny ahy, saingy tokony ho zava-misy sy izay atolotry ny OS X anio dia mbola lavitra ny atolotry ny iOS. Ny fetran'ny rafitra apetrak'i Apple (mihena hatrany ary mihena) sy ny filozofian'i Apple manokana amin'ny famadihana ireo fitaovana iOS ho fitaovana ho an'ny fianakaviana iray manontolo dia midika fa misy fatiantoka mazava izany raha oharina amin'ny OS X, ary ny confluence mety mbola lavitra dia lavitra. lavitra ny rafitra roa.
Zavatra tsotra toy ny fanoratana ity lahatsoratra ity dia tsy azo atao amin'ny iOS. Tsy te-haka sary an-tsaina ny fotoana ilaina amin'ny fampidinana ireo sary amin'ny iPad Pro aho, kitiho izy ireo, ampidiro ao amin'ny fampiharana WordPress (mampalahelo) ho an'ny iOS, apetraho ireo tag, fenoy ny SEO ... I ' Azoko antoka fa maro aminareo no afaka manome ohatra hafa mitovy amin'izany amin'ny asa mahazatra hafa ho ahy. Ary misy olona afaka manome ohatra ny mifanohitra amiko, tsy miahanahana aho.
Fiandohana tsara nefa amin'ny vidiny lafo
Angamba tsy hisy io fifanakalozan-kevitra io raha tsy lafo loatra ny vidin'ny iPad Pro. Azo antoka fa hirodana ny adihevitra nataoko rehefa nisy nilaza tamiko hoe "ny MacBook dia avo roa heny noho ny vidiny." Saingy ny zava-misy dia raha ampidintsika ny Smart Keyboard amin'ny iPad Pro ary mankany amin'ny fitehirizana 128GB (avelako ny pensilihazo sy ny 4G satria tsy manana ireo safidy ireo ny MacBook), Miakatra hatramin'ny $ 1118 ny vidiny, manakaiky ny $ 1299 izay vidin'ny MacBook miaraka amin'ny fitehirizana 256GB.
Izaho manokana dia hanohy hiandry mandra-pahatapahan'ny Apple manapa-kevitra ny hamorona ny endriny hybrid voalohany, Microsoft Surface. Tsy ho ratsy izany raha niseho teo amin'ny efijery ny fampifandraisana ny keyboard amin'ny iPad Pro OS X El Capitan, ary tsy manana fisalasalana aho fa amin'ny alàlan'ny famaritana dia azo natao izany raha tsy nisy olana. Saingy mety ho an'ny taranaka manaraka izany, na ny manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Afaka manolo ny MacBook vaovao ve ny iPad Pro?
Ruben Campos dia hoy izy:
Manaiky tanteraka aho, tsara!
Valiny tamin'i Ruben Campos
thesignresource dia hoy izy:
Manao izay ataony… Bilaogera iray dia hanao MacBook tsy manam-petra, na solosaina finday € 399 aza. Azonao atao ny manoratra amin'ny Windows, Mac OS na Linux, saingy manana rafitra fisie feno ianao, birao iray sy ny lahatahiry ao aminy… Fa koa, ny rafitra misy varavarankely, misintona sy milatsaka, plug ary milalao Ny iPad dia efijery mikasika sy kitendry izay azonao soratana ao anaty rafitra iray faran'izay voafetra. Amin'izao fotoana izao dia tsy vitanao ary toa tsy ho vitanao ny hanao zavatra maro ao anatin'ny fotoana fohy: famerenana sary amin'ny ambaratonga matihanina, famolavolana boky, magazine, fanaovana sary famantarana miaraka aminy, famolavolana drafitra ao CAD, ... Saingy manomboka amin'ny zavatra tsy azon'ny bilaogera asahana bilaogy amin'ny iPad dia tsy misy zavatra ilaina holazaina intsony.
Izany rehetra izany mandritra ny fotoana fohy. Olona ana hetsiny maro no hividy izany any Etazonia, hisy ny fampiharana vaovao, hivoatra ny iOS Pro ... ho hitantsika izay hitranga.
Valio ireo loharanom-baovao
Nanome ohatra iray fotsiny aho. Amin'izao fotoana izao dia mora kokoa ny mametraka ohatra momba ny asa izay tsy mahasoa an'ity iPad ity fa tsy ny fomba hafa. Mazava ho azy fa tsy maintsy mivoatra ity iPad Pro ity, tsy maintsy mivoatra ihany koa ny iOS ary angamba afaka roa taona dia hanana vokatra boribory mifanaraka amin'ny sehatra maro kokoa isika noho izao. Amin'izao fotoana izao dia saika voafetra ho an'ny mpamorona ary amin'ny zavatra hafa kely.
Manaiky tanteraka indrindra amin'ny ampahany farany, isan-taona dia manantena hybrid aho, io no tsara indrindra, manana pro macbook aho nefa mavesatra be ary nalaim-panahy hividy rivotra aho nefa mieritreritra ipad, na dia nivadika ipad 3 fa nanana an'io tamin'ny iphone 6 plus mijanona tsy mahita atiny ao intsony.